ကျွန်တော့်အိမ်: Myhome16.com အား ရပ်နားခြင်း
ရေးသားသူ Tea at 8:24 PM
ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ကိုတီးရယ်.. စာအရေးကျဲနေတာ သတိတော့ ထားမိနေတယ်.. အွန်လိုင်းပေါ်မှလည်း မတွေ့ဘူးနော်..
အချိန်တစ်ခုအထိ အနားယူပြီးသွားရင် ပြန်ရေးပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ.. ရင်းခဲ့တဲ့ အချိန်တွေနဲ့ အခိုင်အမာ ရခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တွေကို ငဲ့ပြီး စာတွေ ပြန်ရေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်..
ကိုတီးနဲ့ အိမ်သားတို့ရေ.. ခင်မင်ခဲ့တာတွေ ပျော်ရွှင်စွာ စ နောက် ခဲ့တာတွေကို အမြဲမှတ်တမ်းတင် သတိရနေမှာပါ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခင်မင်လေးစားရပါသော My Home 16 မှ မောင်နှမများ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
ပိတ်တော့မယ် သတင်းကြားလို့ ပြေးလာလိုက်ပါတယ်။
နောက်ပြန်လာအုံးမယ်ကြားလို့ မျှော်နေသူများထဲတွင် ပါကြောင်းပါခင်ဗျာ...
ANYWAY.. GO ON...
WISH YOU ALL OK!
WAITING THE TIME YOU COME BACK,
ဒီလောက် ပြည့်စုံတဲ့ blog မျိုး ကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြန်မာ blog လောက မှာ မရှိဘူး။
အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ပီး ဖွင့်ပါစေ။
စာတွေလည်း အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ရေးပါ။
သီချင်းလေးတွေ ... ဗဟုသုတတွေ ... အသိပညာတွေလည်း ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ ဒီနေရာကို မကြာ မကြာ ကျွန်တော် လာလာ ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်ဖွင့်မယ့်နေ့ကို မျှော်တဲ့လူတွေထဲမှာ ကျွန်တော်လည်းပါတယ်။
အမြဲလိုလို လာဖတ်ပါတယ။် ပြန်လည်ဝင်လာမဲ့နေ့ကိုစောင့်နေပါ့မယ။်
မအားလို့ခဏနားတယ်လို့ ပဲ ထင်တယ်။
စာမတင်လည်း ဖတ်စရာတွေ တစ်ပုံကြီးမို့ လို့လာလည်နေအုံးမှာပါ။
အားလုံးဖတ်လို့ ကုန်ခါနီးတောင် ပြန်မလာရင်တော့ အိမ်လိုက်ခေါ်မှာ။း)
တီးတို့ အားလုံး အစစအရာရာ အဆင်ပြေကြပါစေ။
ရည်မွန်ထိပ်ထား ကွန်ပျူတာဆိုင်က အပြန် ဧပါယ် (၄) ရက် နေ့မှာ စစ်ခွေးဆွဲ ခံလိုက်ရပါသည်။။
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ ညီ တီး၊၊ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ ၊၊
နှစ်သစ်မှာ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ပါစေခင်ဗျာ
myhome ပိတ်သွားပေမဲ့ဘယ်တော့များပြန်ဖွင့်မလဲဆိုပြီးအမြဲတမ်း check နေမိတယ်...........
ပျောက်နေပါတယ်လို့ အလုပ်မအားလို့လား အဆင်ပြေပါစေကွားးး
ပြန်ရေးပေးဘာ ကိုတီးး)
အပျင်းထူလို့ မ၀သေးဘူးလား..ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါဦး တီးတို့ရေ!!!
ဟေ့ ရောင် ငအီး
မင်းဘလော့က ပိတ်သင့်တာအတော်ကြာပြီကွ ။ ကျေးဇူးပဲကွာ ။
Anonymous သတ္တိမရှိတဲ့ ငကြောက်ကြီး
ဟယ်လို၊ ဟင် ... အခုမှရောက်တာ၊ ပိတ်နေကြပြီလား၊ တာ့တာ ..။
bukowski ebook http://audiobooksworld.co.uk/Seth-Shostak-The-search-for-intelligent-life-in-space/p14209/ bridge to college success ebook [url=http://audiobooksworld.co.uk/es/Padres-y-familia/c1050/?page=16]mql for traders ebook[/url] bundle ebook wholesale
ebook wesites http://audiobooksworld.co.uk/de/Geschichte/c1029/?page=42 taking woodstock ebook [url=http://audiobooksworld.co.uk/A-Cat-with-no-Regrets/p29230/]buy ebook[/url] anabolics 2006 ebook
accounting software electrical contractor http://buyoem.co.uk/de/product-36926/XLineSoft-PHPRunner-6-0 windows xp software in chinese [url=http://buyoem.co.uk/fr/category-100-101/Syst-mes-operationnels]palm treo 750 modem software[/url] add your url meeting software
[url=http://buyoem.co.uk/product-36582/Microsoft-Windows-7-Ultimate-x64-Greek]Microsoft Windows7Ultimate x64 Greek - Software Store[/url] britannia software
maximize web site traffic software http://buyoem.co.uk/de/product-37239/Cakewalk-Pro-Audio-9-0 palm pilot software synchronization [url=http://buyoem.co.uk/product-35908/Cockos-REAPER-4-0-x32]word processing software for children[/url] wild bird feeders software
[url=http://buyoem.co.uk/product-25417/Adobe-Soundbooth-CS4-Mac]Adobe Soundbooth CS4 [Mac] - Download OEM, Software Sale, OEM Software[/url] wired red software
sheppart software http://buysoftwareonline.co.uk/product-10242/Bitkinex-2-93 palm genealogy software [url=http://buysoftwareonline.co.uk/product-35548/Microsoft-Dynamics-CRM-3-0-Professional]meet manager software[/url] windows mobile crypto software
[url=http://buysoftwareonline.co.uk/product-37383/Crossword-Express-7-7]Crossword Express 7.7 - Software Store[/url] signals stock trading software
Also visit my website: easy ways to make money quick
You're so intelligent. You already know therefore considerably on the subject of this topic, made me in my opinion consider it fromalot of various angles. Its like men and women are not fascinated until it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs nice. Always take care of it up!
Helpful information. Fortunate me I found your site accidentally, and I'm shocked why this coincidence did not happened in advance! I bookmarked it.
my page :: rolexスーパーコピー
echo benefits and pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/products/sustiva.htm pharmacy equations [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/sumycin.htm]bay pharmacy[/url]
accredo pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/products/ditropan.htm tenne board of pharmacy combat meth [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/mxman.htm]mxman[/url]
save on pharmacy everett wash http://certifiedpharmacy.co.uk/catalogue/k.htm pharmacy margin [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/fincar.htm]highland regent pharmacy albuquerque[/url]
central market san antonio pharmacy http://certifiedpharmacy.co.uk/products/procardia.htm pharmacy huntington beach california [url=http://certifiedpharmacy.co.uk/products/zetia.htm]zetia[/url]
Injection molding mechanism what price Amazingly exciting .
many people should know! I have on eight pair lying around that I actually wear for all
occasions. Remember, though , have you think of why we all
always talk dealing with it? Nike Boots have
some sort of maximum performance but also are very great.
Feel free to visit my weblog; air max 90 classic
Review my weblog シャネル 新作
。やはり、それです正確に何 ルイヴィトン バッグの女性を規制するに実行。シンプルさルイヴィトン バッグに正確にはクラス！また、偉大な
ケア のため つま先 これらによって撮影 靴 新株予約権 拍手します。 ルイヴィトン バッグ
それ故 になった 有名な は グローブ
my blog post ... ルイヴィトン メンズ
San San Win said...